जातीय भेदभावका घटना : बढे कि बाहिर आए ? | Himalaya Post
Posted by Himalaya Post | २० पुष २०७७, सोमबार १७:५० |
इलाम – साउनको महिना । बिहान त्यस्तै ५ बजेको थियो । इलाम माई नगरपालिकाकी यामकला आचार्य (विश्वकर्मा) ओछ्यानबाट उठ्ने तरखरमा थिइन् । नजिकै टेबुलमा राखेको मोबाइलमा घण्टी बज्यो । सामान्य निद्रामै यामकलाले फोन टिपिन्, हेर्दा आफ्नै देउरानीले गरेकी रहिछन् ।
सामान्य केही काम परेर गरेको होला भन्दै यामकलाले फोन उठाइन् । खबर राम्रो थिएन, देउरानीले यामकलालाई बुवाको मृत्युको खबर सुनाइन्। त्यो समाचारले उनी झसङ्ग भइन् र हतार हतार उठिन् ।
यामकलाको घर र माइतीघरको दूरी करीब ३०० मिटर वरपर छ । यामकलालाई बुवा बिरामी रहेको कुरा त थाहा थियो तर, मृत्यु शैयामै पुग्न लागेको चाहिँ हेक्का थिएन । यसरी एकातर्फ मृत्यसको खबरले मर्माहत भएकी उनलाई अब के गर्ने भन्ने त्रास पो बढ्यो । किनभने उनलाई माइतीमा प्रवेश नपाएको धेरै भएको थियो ।
यामकलालाई दलितसँग विवाह गरेको भन्दै माइत जानै रोक लागेको थियो । विवाह गरेको दशक बित्दा पनि यामकलाले माइतको आँगन टेकेकी थिइनन् । ओछ्यानबाट उठेर उनी आँगनसम्म आइन् । आँगनमा माइतीघर प्रस्ट नदेखिए पनि आँगनमा मान्छे यत्रतत्र हिँडेको देखिन्थ्यो । उनलाई एकातिर माइत जाउ–माइतीले हेय दृष्टिले हेर्ने डर र नजाउँ–आफ्नै ‘जन्म दिने बुवाको मुख नहेरी कसरी बस्नु’ ? । यामकला अब जसरी भए पनि बुवाको मुख हेर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो र माइततिरै पाइला चालिन् । लामो समयपछि माइत जाँदा उनलाई अनौठो लागेको थियो तर जन्म दिने बुवाको मृत्यु भएको खबरले यामकलालाई जहाँसम्म नराम्रो लागेको थियो ।
विवाहपछि माइती जान नपाएकाले यामकलाले बुवाको अनुहार अक्कलझुक्कल मात्र देखेकी थिइन् । उनी बुवाको मृत्युपछि एक झलक भए पनि अनुहार हेर्छु भन्दै माइती पुगेकी थिइन् तर उनले सोचेजस्तो भने भएन । यामकला माइती घरको आँगन मात्र पुगेकी थिइन् उनकी दिदी (बढाबुवाकी छोरी)ले घर पस्न दिइनन् । दिदीले अपशब्द बोल्दै बुवाको मुख हेर्न नपाउने धम्की दिन थालिन् । तर यामकला रोकिइनन् । जसरी भए पनि बुवाको मुख हेर्नु थियो । तर यामकला लम्किएर माइतीघरको पेटीमा मात्र के पुगेकी थिइन् भाइले नै दिएनन् ।
यामकलाले घर परिवार सबै एकपटक हेरिन् । घर त्यही थियो पुरानै । आँगन त्यहीँ थियो तर आफ्नै घरमा पस्न यामकलालाई अनुमति थिएन । त्यसको विपरीत आफ्नै आमाको एकै कोखबाट जन्मिएको भाइले बुवाको मुख हेर्न नदिने अड्डी कस्दै बाटो रोकिदिएपछि उनको केही लाग्ने कुरा पनि भएन । त्यही घरमा जन्मिएर आँगनमा हुर्किएकी यामकलालाई आज पशुतुल्य व्यवहार भयो । यो दुःख र अपमानजनक व्यवहारपछि यामकलालाई रुनबाहेक अरु केही गर्नसक्ने अवस्था थिएन । उनको अनुरोध कसैले सुनेन, अन्तिम पटक आफ्नै बुवाको अनुहार हेर्ने उनको चाहना पूरा हुन सकेन । बुवाको मुखै नहेरी यामकला घर फर्किनु पर्यो ।
उनी बुवाको दाहसंस्कारका लागि खोला पुगिन् तर त्यहाँ पनि उनले अघिल्लै दिनको नियति भोग्नुपर्यो । माइतीले उनलाई खोलामा समेत बुवाको मुख हेर्न दिएनन् । “मलाईसँगै किरिया गर्न दिनुपर्ने थिएन । बुवाको मुख मात्र हेर्न दिएको भएहुन्थ्यो । त्यति पनि पाइन”, यामकलाले भनिन्, “म खोलामा बेहोस हुँदा पनि माइतीले हेरेनन् । घरतिरकै एक-दुई जनाले ट्याम्पोमा राखेर घर ल्याउनुभएछ ।” यामकलाले आफ्नै घरमा बुवाको किरिया गरिन् । किरिया सकेर बुवाको घटनामा भाई टीकाराम आचार्य, छिमेकी लक्ष्मी दङ्गाल र झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका वडा नं ३ बस्ने पार्वता आचार्य बजगाईंलाई विपक्षी बनाई स्वयं जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भई मुद्दा दर्ता गरिन् । अहिले सबै जना घरौटीमा रिहा भएका छन् ।
यामकलाले मात्र होइन । केही महिनाअघि ताप्लेजुङका राजेन्द्र बुढाथोकीले पनि यही समस्या भोग्नुपर्यो । सोह्र वर्षअघि विश्वकर्मासँग बुढाथोकीले विवाह गरेका थिए । कथित तल्लो जातकी छोरीसँग विवाह गरे पनि बुढाथोकीको परिवारसँग सम्बन्ध राम्रै थियो । तीन महिनाअघि बुढाथोकीका बुवाको मृत्यु हुँदा भने घटनाले अर्कै मोड लियो । दलितसँग विवाह गरेको भन्दै राजेन्द्रलाई सामूहिक किरिया बस्न अस्वीकार गरियो ।
विवाहपछि राजेन्द्रकी श्रीमती घर नगए पनि खुलेआम कसैले रोक लगाउन भने सकेको थिएन । तर बुवाको मृत्युमा पीडा भोगिराख्दा बुढाथोकीलाई भने तुच्छ व्यवहार गरियो । सामान्य अवस्थामा राजेन्द्रसँग राम्रै सम्बन्ध भएकाले पनि यो पीडामा सहयोग गरेनन् । राजेन्द्रले यतिसम्म पीडा भोग्नुपर्यो कि मृत्युपश्चात् बुवाको शवको नजिक पर्नसमेत हटक गरियो ।
कानूनीरूपमा जातीय भेदभाव गरे दण्डित गरिने भनिएकाले पनि घटना बाहिर नआएका हुन सक्छन् । जातीय भेदभावसम्बन्धी घटना समाजमा मिलाउने घटना नभएको दलित अधिकारकर्मी नवराज शङ्कर बताउँछन् । उनका अनुसार फौजदारी घटना समाजमा मिल्न नसक्ने भएकाले पछिल्लो समय फाट्टफुट्ट बाहिर आउन थालेका बताउँछन् । “अहिले पनि जातीय भेदभावका घटना त प्रशस्त घटछन् तर थाहा नपाउने गरी भएका हुन्छन्”, शङ्कर भन्छन्, “पहिले दलितले छुन्छ भनेर विवाह तथा अन्य कार्यक्रमको भोजमा फाल्टै ठाउँमा पकाएर खान दिने गरिन्थ्यो तर अहिले भने दलित समुदायलाई नबोलाउने गरिएको छ ।”
नेपालको संविधान (२०७२) को भाग–३ को मौलिक हक र कर्तव्यको धारा २४ मा ‘छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक’ व्यवस्था गरिएको छ । यो धाराको उपधारा १ अनुसार ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ भने धारा २४ को उपधारा ४ अनुसार ‘यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
यस ऐनको दफा ९ को उपदफा–१ अनुसार ‘कसैले यस ऐनबमोजिमको कसुर गरेको ठहरेमा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने’ जनाइएको छ । उपदफा २ मा भने ‘कसुरदारले पीडितलाई कुनै शारीरिक हानि नोक्सानी पुर्याएको रहेछ भने अदालतले सोको प्रकृतिका आधारमा उपचार खर्च वा थप हानि नोक्सानीबापत कसुरदारबाट पीडितलाई मनासिब रकम भराउने आदेश दिनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले बन्दाबन्दी शुरु भएपछि जातीय भेदभावका घटना बढेका हुन् । उनका अनुसार घटना दलित समुदायले पानी छोएदेखि बलात्कार सम्मका छन् । गत पाँच वर्षको तथ्याङ्कअनुसार ३२ जिल्लामा मात्र भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दा परेका छन् ।
“जतिसुकै कठोर कानून बनाए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाले फितलो निर्णय गरे पीडकले न्यायको अनुभूति गर्न पाउँदैन”, मिजार भन्छन्, “कानून त्यति कमजोर त होइन तर चलनचल्तीमा कमजोर देखिएको छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायले दरिलो निर्णय गरिदिए भेदभावका घटनामा ह्रास आउन सक्छ ।” रासस
Previousमन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे एक हप्ताभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
Nextप्रचण्ड-माधव समूहद्वारा गुरुङ र पोखरेललाई कारवाही, प्रदेश इन्चार्जबाट हटाइयो
९ मंसिर २०७८, बिहीबार १२:०६
१ चैत्र २०७७, आईतवार १४:२४
बोको र भाले चढाउने सर्तमा सडक र ढल निर्माण !
३० असार २०७५, शनिबार ०९:२८
प्रतिनिधि सभामा राजमोले प्यूठानबाट खाता खोल्यो, दुर्गा पौडेल निर्वाचित
२५ मंसिर २०७४, सोमबार ०९:०२